लन्डनमा मृत्यु भएका प्रशान्तमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि ! सेयर गरौ « Online Tv Nepal
लन्डनमा मृत्यु भएका प्रशान्तमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि ! सेयर गरौ
Published : 26 March, 2020 7:20 pm
लन्डनमा एक ४० वर्षीय नेपालीको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। गत सोमबार मृत्यु भएका प्रशान्त अर्याललाई कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। दक्षिण पूर्वी लन्डनको प्लमस्टिडमा बस्दै आएका अर्यालको क्विन एलिजावेथ अस्पतालमा उपचारका क्रममा गत सोमबार बिहान निधन भएको थियो।
लन्डनमै बस्ने मृतकका आफन्त पदम कार्कीका अनुसार बुधबार अस्पतालले परिवारलाई टेलिफोन गरेर मृतकलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेको थियो। ‘हिजोमात्र अस्पतालले फोन गरेर कोरोना सक्रमणको कारण मृत्यु भएको बतायो,’ कार्कीले भने।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार मृतक अर्यालमा देखिएका लक्षणहरू कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा थिए। उच्च रक्तचापलगायतका स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका मृतक अर्यालको कुनै गम्भीर प्रकृतिको स्वास्थ्य अवस्था भने नरहेको बताइएको छ।
चितवन घर भएका मृतक अर्याल लामो समयदेखि लन्डनमा बस्दै आएका थिए। उनका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन्।
उनीहरू अहिले लन्डनको आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिएका छैन।
‘आइसोलेसनमा बसेको परिवारमा त्यस्तो कुनै लक्षण देखा परेको छैन,’ अहिले परिवारको सहयोगीको रूपमा रहेका कार्कीले भने।